Fifidianana Tany Myanmar Tantaraina Tafahoatra? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Avrily 2012 12:15 GMT
Nifaly izao tontolo izao nahare ny valim-pifidianana (ampahany) ofisialy farany teo tany Myanmar nahitana ny fandresen'ilay olo-malazan'ny demokrasia Aung San Suu Kyi sy ny antokony National League for Democracy. Mbola mitoetra ho vitsy an'isa ny NLD ao amin'ny Antenimiera fa niteraka fanantenana teo amin'ny maro izany ho amin'ny tetezamita mankany amin'ny demokrasia.
Saingy raha henoina ny filazan'ny mpiserasera sy ny mpanara-maso politika sasany, tokony tonena ihany ny tsinjatsinjaka tamin'ny fandresen'ny NLD satria mbola ny antoko manohana ny fitondrana miaramila ihany no antoko matanjaka ao an-toerana. Nampiako izany hevitra izany i Fifty Viss
Tsy nanova ny endrika na ny diam-panitsiana ny fifidianana. Ny fampidirana manokana ny NLD sy Suu Kyi angamba no vokatra lehibe indrindra [tsy] ahafahany manohitra ny fifidianana (nahitsy ny lalàna ahafahany mandray anjara). Nieritreritra ny halakin'ny voka-pifidianana navoakan'ny Vaomieram-Pifidianana Iraisana ihany koa aho. Tafavoaka tao anatin'ny indray andro ny vokatry ny ankamaroan'ny fari-pifidianana.
Tsy gaga ny mpanoratra raha navela handresy teny amin'ny biraom-pifidianana ny NLD
Rano indray mitete anaty rano fotsiny ireny isa ireny. Nilamina tsara ny fifidianana ampahany manokana iny fa toy ny mitsangatsangana fotsiny, indrindra raha entina hanesorana ny fanasazian'ny tandrefana no sandany. Ho be ny nihiaka ary ho nandrivorivo ny tsikera raha kely kokoa ny fandresen'ny NLD. Mivandravandra noho izany fa ho tombontsoan'ny fitondrana indrindra ny miantoka ny fandresen'ny NLD.
Misy aza ny mieritreritra fa entin'ny fitondrana miaramila hanamarinana ny fitantanany i Suu Kyi
Tsapan'ny maro amin'ireo vondro-piarahamonina Birmana ampitan-dranomasina fa ataon'ny fitondrana ankehitriny vatom-panorona hanamafisany fahefana fotsiny i Suu Kyi, mangarahara sy tsotra.
Milaza ny heviny manoloana ny teti-panoron'ny fitondrana miaramila i Wagaung
Misy ny sasantsasany amintsika efa nahita ny teti-panorony hatramin'ny voalohany. Ny sasany tsy manaiky mihitsy, fandresena kely tambony vilia talesaka hanamafisany ny tsy fijereny afa-tsy zavatra miabo. Misy indray ny hafa tsy manaiky hijery ny lafy tsaran'ny fanasaziana. Ny mpandraharaha iraisampirenenan'ny banky sy ny orinasa indray mahita loharanonkarena voajanahary midadasika tsy mbola voajary sy mpikarama mora vidy. Tsy manadino ny tombontsoany amin'ny fampiasana ny karaoty sy ny kibay mihitsy ny Tandrefana.
Manazava ny antony iantsoan'ny sasany ilay fifidianana farany teo ho ‘sell-elections’ na ‘fividianana’ na ‘lavantim-pifidianana’ i Shan Herald
Niteraka resabe teo amin'ny mpanara-baovaon'i Myanmar, na izany avy any ivelany na avy eto an-toerana, ny fifidianana ampahany antsoin'ny sasany ho “lavantim-pifidianana”, fa notanterahina izy iny hamidy amin'ny fiarahamonina iraisampirenena fa efa tonga amin'ny takelaka vaovao i Myanmar (tsara kokoa aza satria lasa tsy nihinankena intsony ilay tigra).
Ankoatra ny fanatanterahana azy tamin'ny fetin'ny lainga, izay nampanotany tena avy hatrany, « Fa iza indray no hofitahan'i Myanmar amin'ity indray mitoraka ity ? », misy ihany ny singa vitsivitsy heveriko fa manan-danja.
Toa tsy misy idiran'ny hoe politika inona sy kandidà iza no tian'ny olona ilay fifidianana nolazaina. Hita kokoa ho fifampitolomana eo amin'ny rafi-panjakana masina telo izy ity dia ny : Vondrona menavazana, Olona iray manana ny mahaizy azy ary ny Foko.
Ny antoko manohana ny fitondrana no voalaza ho ‘vondrona menavazana’ eto; ny ‘olona manana ny mahaizy azy’ indray dia i Aung San Suu Kyi; ary ny farany ny antoko Shan no voalaza ho ‘Foko’ eto.
Horakoraka an-dalambe tamin'ny filazana fa nandresy tamin'ny fifidianana ampahany ny mpanohitra. Saripika dawn-1o9
Mizara ny tsikariny nandritra ny androm-pifidianana i dawn_1o9
Niaraka tamin'ny namako hijery ny fanisam-bato tao Mingalar Taung Nyunt aho omaly. Iray amin'ny fokontanin'i Rangoon nisiana fifidianana ampahany i Mingalar Taung Nyunt.
Tsy nifidy ny fokontany nisy ahy ka nojereko izay nitranga tany amin'ny fokontany hafa.
Maro dia maro tokoa ny olona teo akaikin'ny biraom-pifidianana. Sahala amin'ny hoe misy fety
Faly tamin'ny valim-pifidianana i ClimbUpTreesToLookForFish
Heniky ny fanantenana sy ny fitiavana ieo olona efa niandry ela dia ela ity andro ity. Mifikitra amin'izany fanantenana izany aho indrindra fa efa tafavoaka ny ala, ary an-dalana mankany amin'ny demokrasia
Indreto ny tatitra avy amin'ny ekipa mpanara-maso ny fifidianana
Tsy afa-nampihatra ny zony ny miaramila iray sy ny iray vondro-tafika aminy maro, tao amin'ny toby iray miorina ao Lashio, raha nilaza ny hampihatra ny zony izy saingy ny lehibeny no naka ny taratasim-pifidianana sy nanao vokovoko tamin'ny anarany.
Nanamarika ny mpanaramaso iray avy ao amin'ny SNDP (antoko Shan) fa maro ny Shans tsy manana kara-panondro noho ny halafon'ny fikarakarana azy hatramin'izay ary mieritreritra ihany koa ry zareo fa tsy hivoaka ny faritr'i Lashio ka tsy ilaina loatra ny fananana izany. “Ankehitriny efa mihamora izany, eo ho eo amin'ny 5000 kyat eo, ary mila ny fanohanan'izy ireo izahay; tokony ampirisihana manomboka izao ny mba hananan'ireny olona ireny kara-panondro” hoy ny nolazainy. “Etsy ankilany ny shinoa fiaviana na teraka teto na ireo vao tonga, mahasahy mividy kara-panondro mihoatra ny 100 000 kyat isanisany. Mbola hitombo izany fironana izany raha tsy voafehy”
Manolo-kevitra hisian'ny fanitsiana ny lalam-pifidianana Ny fikambanana aziatika hisian'ny fifidianana malalaka
Fahadisoana maro hita ao amin'ny lisi-pifidianana, fikasana hanodina ny fitaovana eny anivon'ny tanàna madinika sy ny distrika avy amin'ny kandidàn'ny antoko mitondra, tsy fahampian'ny fanabeazana ny mpifidy ankoatra ny tahotra isan-karazany, izay mamela dia eo amin'ny fahombiazana sy ny fandrindrana ny fombafombam-pifidianana.
Ankoatra izany, mbola nisy ihany ny fandikan-dalàna isan-karazany na dia eo aza ny mpanaramaso iraisampirenena. Mampivoitra ny filàna iraka mpanara-maso iraisampirenena (maharaka ny birao rehetra) “mahaleo tena” sy tsara omana mandritra ny fifidianana ankapobeny amin'ny 2015 indrindra izany.